Dad Ku Dhintay Qarax Culus Oo Ka Dhacay Banaanka Garoon Lagu Ciyaaro Kubada Cagta %
Ugu yaraan 12 qofood ayaa ilaa hada la ogyahay inay ku dhinteen, halka 40 kale uu dhaawacyo kala duwan uu kasoo gaaray, kadib markii Qarax culus oo ku dhacay banaanka garoon lagu cayaaro kubada cagta, maanta oo Jimco ahayd.
Garoonnka uu qaraxu ka dhacay oo uu ku yaalaa Gobolka Helmand, oo ku yaala Koonfurta wadanka Afghanistan, ayaa waxaa xiligaas ka socotay ciyaar kubada cagta ah, taasoo ay usoo daawasho tageen Dad aad ubadan.
Nooca qaraxyo uu ahaa ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa Baabuur laga soo buuxiyay walxo qarxa, islamarkaana la dhigay banaanka hore ee garoonka, iyadoona la aaminsan yahay inuu saarnaa qof ay ku rakibnaayeen walxo qarxa, sida ay Boolisku sheegeen.
Aminullah Abed, oo ah madaxa qeybta caafimaad ee gobolkaas oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay dhimashada dad badan, isagoona carabka ku dhuftay inay haleen dadka dhaawaca daawaynta iyo waliba bax-baanadii ay ubaahnaayeen.
Qarax illaa iyo hadda lama oga cidda ka dambeysay, maan jirto koox dhabarka saaratay masuuliyadda weerarkaan, laakiin Afghanistan, ayaa wuxuu ka yimid dalalka Islam-ka ah oo ay ka taagan tahay qalalaasasha dhanka amaank ah.
Aminullah Abed ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay in qaraxaan dhacay uu kusoo aadayo iyadoo ay dadka reer Afghanistan udabaal-degayeen bilashada sanadkooda cusub, islamarkaana dadku ay ahaayeen kuwa guryahooda ka maqan.